डिसेजिस्टेल पाउडर बिक्रीको लागि (54024-22-5): समीक्षा र डोजेज र प्रभाव | AASraw
डिसेजिस्टेल पाउडर बिक्रीको लागि: समीक्षा र डोजज र प्रभाव
/ब्लग/Desogestrel/डिसेजिस्टेल पाउडर बिक्रीको लागि: समीक्षा र डोजज र प्रभाव
प्रकाशित 06 / 28 / 2018 by Dr. Patrick Young मा लेखियो Desogestrel. यो संग0टिप्पणी.
डिज्जेस्टेल पाउडरको बारेमा सबै कुरा
1.Desogestrel 54024-22-5 अवलोकन
2.Desogestrel पाउडर समीक्षा
3। एक्शन-डिसेजिस्टेल पाउडरको तंत्र
4.Howogestrel पाउडर प्रयोग गर्न को लागी?
5। Desogestrel पाउडर डोज़
6.Who Desestestra पाउडर को उपयोग गर्न सक्छन्?
7। लाभ र हानि-डिसेजेस्टेल पाउडर
9.Desogestrel पाउडर प्रभाव र स्तनपान गर्दा
10.Desogestrel पाउडर बिक्री को लागि
Desogestrel पाउडर भिडियो
I.Desogestrel पाउडर अक्षरों:
आणविक सूत्र: C22H30O
पिघल प्वाइन्ट: 109-110 ° C
भण्डारण अस्थायी: -20 ° C फ्रीजर
1। Desogestrel 54024-22-5 अवलोकन
Desogestrel र गर्भावस्था रोक्न एथिनाइल एस्ट्रायडोल संयोजन प्रयोग गरिन्छ। यो एक जन्म नियंत्रण गोली हो जुन दुई प्रकार को हार्मोन, desogestrel र ethinyl estradiol छ, र जब ठीक देखि लिया, गर्भावस्था को रोकथाम। यसले प्रत्येक महिनाको विकासबाट महिलाको अन्डा रोक्न काम गर्दछ। अण्डाले अब शुक्राणु र गर्भधारण (गर्भावस्था) रोकिएको छैन।
कुनै गर्भनिरोधक विधि 100 प्रतिशत प्रभावकारी छैन। जन्म नियन्त्रण विधिहरू जस्तै सर्जरी बाँझिने वा सेक्स गर्नुभएन गर्नाले नियन्त्रण नियन्त्रण गोलहरू भन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ। आफ्नो चिकित्सकसँग जन्म नियन्त्रणको लागि आफ्नो विकल्पहरू छलफल गर्नुहोस्।
यो औषधीले एचआईभी संक्रमण वा अन्य यौन संचारित रोगहरू रोक्न सक्दैन। यसले आपातकालीन गर्भनिरोधकको रूपमा मद्दत पुर्याउँदैन, जस्तै असुरक्षित यौन सम्पर्क पछि। यो औषधि मात्र तपाइँको डाक्टरको पर्चामा उपलब्ध छ।
2। Desogestrel पाउडर समीक्षा
उत्पादन नाम Desogestrel पाउडर
कैस नम्बर 54024-22-5
आणविक सूत्र C22H30O
आणविक वजन 310.47
पिल्ट बिन्दु 109-110 ° C
भण्डारण तापमान -20 ° C फ्रीजर
3। तंत्र ओf Action—Desogestrel पाउडर
प्रोजेस्ट्रोन र एस्ट्रोजन रिसेप्टरहरूमा बाँध्छ। लक्षित कक्षहरुमा महिला प्रजनन पथ, स्तन ग्रंथि, हाइपोथोमस, र पिट्यूटरी शामिल छ। एकपटक रिसेप्टरमा सीमित भएपछि, डिजागेलेल जस्तै प्रोजेस्टेन्सले हाइपोथोमसबाट गोनडोट्रोटिन रिलीज हार्मोन (GnRH) को रिलीज को आवृत्ति घटाउनेछ र पूर्व-ओभर्युलेटर एलएच (luteinizing हार्मोन) सर्जन खाली पार्छ।
Desogestrel एक महिला गर्भनिरोधक को रूप मा प्रयोग गरिन्छ। Desogestrel स्वाभाविक रूप देखि महिला लिंग हार्मोन, प्रोजेस्टरोन को प्रोजेस्टिन या एक सिंथेटिक रूप हो। एक महिलाको सामान्य मासिक चक्रमा, एक अण्डा पूर्ण हुन्छ र अंडा (ओल्लेशन) बाट जारी गरिएको छ। त्यसपछि अंडाले प्रोजेस्टोनको उत्पादन गर्दछ, थप अन्डाको रिहाई रोक्न र सम्भावित गर्भावस्थाको लागि गर्भको अस्तरलाई रोक्न। यदि गर्भावस्था हुन्छ भने, शरीरमा प्रोग्नेस्टोन स्तर उच्च रहन्छ, गर्भको अस्तर बनाए राख्छ। यदि गर्भावस्था उत्पन्न भएन भने, शरीर घटाउने क्रममा प्रोजेस्टरोन स्तरहरू, मासिक धर्म अवधिको परिणामस्वरूप। Desogestrel शरीर प्रक्रियाहरु सोच मा चाल गर्दछ कि ovulation पहिले नै भयो, सिंथेटिक प्रोजेस्टरोन को उच्च स्तर को बनाए राखन। यसले अण्डाबाट अण्डाको रिहाई रोक्छ।
4। डिज्जेस्ट्रो पाउडर कसरी प्रयोग गर्ने?
यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि तपाई यस औषधिको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ जुन तपाईंको डाक्टरले निर्देशित गर्दछ। यसको प्रयोग नगर्नुहोस्, यो धेरै पटक प्रयोग नगर्नुहोस्, र तपाईंको चिकित्सकको आदेश भन्दा लामो समयको लागि प्रयोग नगर्नुहोस्।
मौखिक गर्भनिरोधकहरु लाई सम्भव रूपमा सुरक्षित र विश्वसनीय रूपमा प्रयोग गर्न, तपाइँले यो कसरी बुझ्न र कहिलेकाहीँ र कुन प्रभावहरूको आशा गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्नैपर्छ।
यो औषधि रोगी निर्देशनहरूसँग आउँछ। यी निर्देशनहरू सावधानीपूर्वक पढ्नुहोस् र पछ्याउनुहोस्। यदि तपाइँसँग कुनै प्रश्न छ भने तपाईंको डाक्टर वा फार्मासिस्टलाई सोध्नुहोस्।
यो दबाइले ट्याब्लेट डिस्पेंसरको साथ छाला प्याकेटमा उपलब्ध छ। प्रत्येक ब्लिस्टर प्याकेजले 28 ट्याब्लेटहरू फरक रङहरूसँग लिन्छ जसमा ब्लिस्टर पैकमा निर्देशित रूपमा उही क्रममा लिइन्छ।
जब तपाइँ यो औषधि प्रयोग गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, गर्भवती हुन सक्नु अघि तपाईंको शरीर कम्तीमा7दिनको समायोजन गर्न आवश्यक पर्नेछ। गोलमेचको पहिलो चक्रको पहिलो7दिनको लागि गर्भनिरोधनको दोस्रो भाग (जस्तै, कन्डोम, स्पर्ममेन्सी, वा ड्याफ्राम) प्रयोग गर्नुहोस्।
डेसजेस्टेल लिनुहोस्प्रत्येक दिन एउटै समयमा पाउडर। जन्म नियंत्रण नियन्त्रण गोलहरू राम्रो काम गर्दछ जब 24 घण्टा भन्दा बढी खुराकहरू बीच जान्छ।
24 घण्टा भन्दा बढि द्वारा आफ्नो गोली लिन छोड्नुहोस् वा देरी नगर्नुहोस्। यदि तपाईं एक खुराक छुनुहुन्छ, तपाई गर्भवती हुन सक्नुहुनेछ। तपाईंको गोलहरू लिन वा अन्य नियन्त्रण नियन्त्रणको अर्को तरिका प्रयोग गर्न सम्झन मद्दतको लागि तपाईंको डक्टरलाई सोध्नुहोस्।
तपाईलाई बिरामी वा चिसो महसुस गर्न सक्नुहुनेछ, विशेषगरि तपाईंले केहि औषधिहरू लिनु भएको केही महिनाहरूमा। यदि तपाईंको विवेक निरन्तर छ र दूर छैन, तपाईंको डाक्टरलाई कल गर्नुहोस्।
यो औषधि लिने क्रममा3भित्र4घण्टा भित्र उल्टो वा उल्टा छ भने रोगी पत्रकमा निर्देशनहरू पछ्याउनुहोस् वा तपाईंको डाक्टरलाई फोन गर्नुहोस्। यो सम्झिएको खुट्टाको रूपमा व्यवहार गर्नुहोस्।
जब तपाईं यस औषधि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने अंगूर खाई नदिई अनि अंगूरको रस पिउदिनुहोस्। अंगूर र अदरका रसले शरीरमा अवशोषित यो औषधिको मात्रा परिवर्तन गर्न सक्छ।
यस औषधिको खुट्टा बिरामीको लागि फरक हुनेछ। तपाईंको डाक्टरको आदेशहरू वा लेबलमा निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्। निम्न जानकारीले यो दबाइको केवल औसत खुराक समावेश गर्दछ। यदि तपाईंको खुट्टा फरक छ भने, तपाईंको चिकित्सकले यसो गर्न नदिँदा यसलाई परिवर्तन नगर्नुहोस्।
तपाईंले लिनुभएको औषधिको मात्रा दबाइको बलमा निर्भर गर्दछ। साथै, तपाईंले प्रत्येक दिन खुराकहरूको संख्या, खुट्टाहरू बीचको अनुमति दिनुभएको समय, र तपाईंले दवाव गर्नुहुने समयले चिकित्सा समस्यामा निर्भर गर्दछ जसको लागी तपाइँ औषधि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ।
तपाईंको डाक्टरले तपाइँलाई तपाइँको मासिक धर्म अवधिको पहिलो दिनमा (दिन 1 सुरु भनिन्छ) वा तपाईंको मासिक धर्म अवधिको सुरुवात पछि पहिलो आइतबारमा तपाईंको खुसी खुवाउन सक्छ। आइतबार सुरु)। जब तपाइँ एक निश्चित दिन सुरू गर्नुहुन्छ यो तपाइँलाई त्यस तालिकाको पालना गर्नु महत्त्वपूर्ण छ, भले पनि तपाईले एक खुर्सानी सम्झनु भएको छ। आफ्नै मा आफ्नो तालिका परिवर्तन नगर्नुहोस्। यदि तपाईंले प्रयोग गर्नुभएको तालिका सुविधाजनक छैन, यसलाई परिवर्तन गर्न तपाईको डाक्टरसँग कुराकानी गर्नुहोस्। आइतवार सुरुको लागि, तपाइँलाई पहिलो7दिनको लागि अर्को प्रविधि नियन्त्रण (जस्तै, कन्डोम, डायाफ्राम, स्पर्ममेन्सि) प्रयोग गर्न आवश्यक छ।
तपाईंले पहिलो रेजिमेसनको सुरुवात गरेपछि तपाईंको अर्को र सबै पछिको 28-दिनको नियमित उपचारको सुरुवात सुरु गर्नुपर्दछ र त्यही तालिकाको अनुसरण गर्नुहोस्।
मौखिक खुराक फारम (ट्याब्लेट) को लागि:
♦ गर्भनिरोधक को लागि (गर्भावस्था को रोकन को लागि):
वयस्कों र किशोरीहरु - एक्स लाइट नारंगी ट्याब्लेट (सक्रिय) एक्सएनमक्स लगातार दिन को लागी प्रत्येक दिन एक दिन को लागी एक 21 दिन प्रति मासिक चक्र को लागि एक हरा गोली (घुसपैठ) को पछि लागी एकै समयमा लिया।
बच्चाहरु को प्रयोग र खुराक तपाईंको डाक्टर द्वारा निर्धारित हुनुपर्छ।
तपाईंको डाक्टर वा फार्मासिस्टलाई निर्देशनका लागि कल गर्नुहोस्। यस औषधिमा के गर्न चाहनुहुन्छ भने केही रोगी निर्देशनहरू यदि तपाई एक खुराक छुनुहुन्छ भने। यी निर्देशनहरू ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस् र पछ्याउनुहोस् र यदि तपाइँसँग कुनै प्रश्नहरू छन् भने तपाईंको डाक्टरलाई कल गर्नुहोस्।
7 दिनको लागि एक दोस्रो फारमको जन्म नियन्त्रण प्रयोग गर्नुहोला गर्भावस्था रोक्न एक खुराक सम्झनुहोस्।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको चिकित्सकले तपाईंको अवधि2महिनालाई पङ्क्तिमा हराएको छ, किनभने यसले गर्भवती हो। तपाईं त्यो महिनाको लागि अवधि नहुन सक्छ यदि तपाईं एक भन्दा बढी खुसी खुल्ला वा तपाईंको तालिका परिवर्तन गर्नुहुन्छ।
तपाईं ब्वाईस ब्लिडिङ हुन सक्नुहुनेछ वा स्पटिङ गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं समय मा एक गोली छैन। अधिक गोलियाँ तपाईले सम्झनु हुन्छ, तपाईले ब्लिडिङ गर्नु पर्ने अधिक सम्भव छ।
♣ यदि तपाइँ एक लाइट सुन्तलाको गोलीलाई सम्झनुहुन्छ भने: चाँडै सकेसम्म गोली लिनुहोस् र तपाईंको नियमित तालिकामा अर्को गोली लिनुहोस्।
♣ यदि तपाईं 1 वा2हप्तामा दुईवटा रातो सुन्तला गोलहरू सम्झनुहुन्छ भने: दुई गोलहरू चाँडै सकेसम्म लिनुहोस् र अर्को दुई गोलहरू अर्को दिन अर्को। प्याक पूरा नगरे सम्म एक गोली लिनु जारी राख्नुहोस्।7दिनको लागि एक खुराक सम्झँदा एक दोस्रो रूपको जन्म नियन्त्रण (जस्तै, कन्डोम, स्पर्ममेन्सि) प्रयोग गर्नुहोस्।
♣ यदि तपाई हप्ता3मा दुई लाइट सुन्तला गोलहरू छुनुहुन्छ भने, वा यदि तपाइँ कुनै हप्तामा तीन वा बढी हल्का नारंगी गोलहरू सम्झनुहुन्छ भने:
♦ दिन 1 सुरु: बाँकी प्याक बाहिर फ्याँक्नुहोस् र त्यही दिन नयाँ प्याकेज सुरु गर्नुहोस्।
♦ आइतबार सुरु: रविवार सम्म एक गोली लिन जारी राख्नुहोस्, त्यसपछि बाँकी प्याक फ्याँक्नुहोस् र त्यही दिन नयाँ प्याकेज सुरु गर्नुहोस्। गर्भवतीलाई रोक्नको लागि7दिनको लागि दोस्रो प्रकोप प्रयोग गर्नुहोस् (जस्तै, कन्डोम, शुक्राणुरोधी)। यदि तपाइँ आफ्नो मासिक धर्म अवधि2महिनामा पङ्क्तिमा छुनुहुन्छ भने, तपाईंको डाक्टरसँग जाँच गर्नुहोस् किनभने तपाइँ गर्भवती हुन सक्छ।
♣ यदि तपाइँ हप्तामा सातवटा हरियो गोलहरू सम्झनुहुन्छ भने: तपाईंले गोल गर्नुहुने गोलहरू छोड्नुहोस्। प्याक पूरा नगरे सम्म एक गोली लिनु जारी राख्नुहोस्।
6। कसले डी प्रयोग गर्न सक्छesogestrelपाउडर?
अधिकांश महिलाहरूले डिजोगेल पाउडर प्रयोग गर्न सक्छन्, तर तपाईं सक्षम हुन सक्नुहुन्न यदि तपाईं:
♦ तपाईंलाई गर्भवती हुन सक्छ भन्ने लाग्छ
♦ तपाईको अवधि परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्न
♦ अन्य औषधिहरू लिनुहोस् जुन गोलीलाई असर पार्न सक्छ
♦ यौन सम्बन्धको अवधि वा पछिको बीचमा विच्छेदन खून भएको छ
♦ धमनी रोग वा हृदय रोग विकसित भएको छ वा एक स्ट्रोक भएको छ
♦ लिभर रोग छ
♦ छातीको क्यान्सर छ वा अतीतमा भएको छ
♦ गम्भीर शल्यक्रिया या लिभर ट्यूमर
♦ यदि तपाईं स्वस्थ हुनुहुन्छ र त्यहाँ चिकित्सकीय कारणहरू छन् कि तपाईंले डिजोसिएल पाउडर किन लिनुभएन भने, तपाईले यो मेनुप्रोकस सम्म लिन सक्नुहुनेछ र जब सम्म तपाई 55 हुनुहुन्न।
♣ स्तन पान
यदि तपाइँ स्तनपान गर्दै हुनुहुन्छ भने desogestrel पाउडर प्रयोग गर्न सुरक्षित छ। डिज्जेको सानो मात्रा तपाईंको स्तन दूधमा पुग्न सक्छ, तर यो तपाईंको बच्चालाई हानिकारक छैन। यसले तपाइँको स्तन दूध उत्पादन गर्ने तरिकालाई असर गर्दैन।
यद्यपि यो धेरै सम्भव छैन, डिजाईजर पाउडर लिँदा त्यहाँ धेरै सानो मौका छ कि तपाइँ गर्भवती हुन सक्दछ।
यदि यो हुन्छ भने, त्यहाँ कुनै प्रमाण छैन कि गोलीले तपाईंको गर्भमा बच्चालाई हानी गर्नेछ। यदि तपाइँ गर्भवती हुन सक्नु हुन्छ भने, तपाईंको जीपीसँग बोल्नुहोस् वा तपाइँको स्थानीय गर्भनिरोधक क्लिनिक भ्रमण गर्नुहोस्।
यदि तपाईंको पेटमा अचानक वा असामान्य दर्द छ भने चिकित्सा सल्लाह पाउनुहोस्, वा यदि तपाईंको अवधि सामान्य भन्दा धेरै सानो वा हल्का हो। यो सम्भव छ कि यो एक अक्टोपिक गर्भावस्था को चेतावनी चेतावनी हो, यद्यपि यो दुर्लभ छ।
यो सेक्स बाधा गर्दैन you may not have regular periods while taking it – your periods may be lighter, more frequent, or may stop altogether, and you may get spotting between periods
you can use it at any age – even if you smoke and are over 35 some medicines, including some (uncommon) एन्टिबायोटिक, can make it less effective
♦ Find out Desogestrel पाउडर विन्डोज एक्सपी, र तपाईंको आवश्यक सल्लाहहरू लेख्नुहोस्।
1। उच्च गुणवत्ता प्रतिस्पर्धी मूल्य संग:
2) हामी निर्माता हो र कारखाना मूल्य संग उच्च गुणवत्ता वाला उत्पादनहरु प्रदान गर्न सक्छन्।
2 .फस्ट र सुरक्षित डिलीवरी:
1) भुक्तानी पछि 24 घण्टामा पार्सल पठाउन सकिन्छ। ट्रयाकिङ नम्बर उपलब्ध छ
2) सुरक्षित र विवेकपूर्ण शिपमेंट। तपाईंको छनौटका लागि विभिन्न यातायात विधिहरू।
3.We ग्राहकहरु लाई दुनिया भर मा छ:
1) व्यावसायिक सेवा र अमीर अनुभवले ग्राहकलाई सजिलै महसुस गर्छ, पर्याप्त स्टक र छिटो वितरणले उनीहरूको इच्छा पूरा गर्दछ।
2) मार्केट प्रतिक्रिया र सामान प्रतिक्रियाको सराहना गरिनेछ, ग्राहकहरूको आवश्यकतालाई हाम्रो जिम्मेवारी हो।
3) उच्च गुणस्तर, प्रतिस्पर्धी मूल्य, छिटो वितरण, प्रथम-कक्षा सेवालाई ग्राहकहरूबाट विश्वास र प्रशंसा प्राप्त गर्दछ।
1) सुरक्षित वितरण: च्यानल विविधता, ग्राहकहरूको गोपनीयताको सुरक्षा गर्नुहोस्। अनि भर्खरै, पुनः पुन: जहाज पठाउनुहोस्।
2) कहिल्यै परिवर्तन नगर्ने: उत्पादनले सधैं उच्च शुद्धता कायम राख्दछ, परिवर्तन हुनेछैन, उच्च गुण हाम्रो कम्पनीको संस्कृति हो।
3) राम्रो सेवाहरू: ग्राहक समस्याहरूको समाधान गर्न चाँडै सकेसम्म, ताकि ग्राहकहरू सुरक्षित रूपमा माल प्राप्त गर्दछन्।
टैग: डिज्जेस्टेल पाउडर किन्नुहोस्, Desogestrel पाउडर
यो Bortezomib को बारे मा जान्न सबै केहि छ कति 4-DHEA टेस्टोस्टेरोनमा रूपान्तरित हुन्छ?